सूर्योदय लघुवित्त : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, २० असार २०७६)
गतवर्षको असार २१ गते सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार ५९० मा कारोबार भएको थियो । १ वर्षको अवधिमा कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता अधिकतम रू. १ हजार ७८६ पुगेको थियो । कम्पनीले शेयरधनीका लागि ४२ दशमलव ७५ प्रतिशत बोनस र २ दशमलव २५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेपछि शेयरमूल्य समायोजन भई कम्पनीको मूल्य रू. ९८० मा आइपुगेको हो । त्यसपछि बजार घट्दै आएकाले कम्पनीको शेयरमूल्य असार १९ गते प्रतिकित्ता रू. ७९३ मा आइपुगेको छ । बिहीवार कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ ।
कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. २ करोड ६५ लाख १५ हजार नाफा कमाएको छ । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० करोड ७९ लाख १९ हजार पुगेको छ । कम्पनीले हकप्रद तथा बोनस शेयर जारी गरेपछि पूँजी बढेको हो । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक रू. ३२ दशमलव ७६ पैसा छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १६४ दशलमव ८२ पैसा छ ।
2019-07-05 - 109 view(s) - abhiyan